Home News Dowladda Mareykanka oo Walaac ka Muujisay Taageeridda Farmaajo iyo Mursal ee Mukhtaar...
Dowladda Mareykanka oo Walaac ka Muujisay Taageeridda Farmaajo iyo Mursal ee Mukhtaar Roobow in lagu badalo Shariif Xasan
Madaxweynaha JFS Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo haysta dhalashada Mareykanka ay ku dhaga adeygay diblomaasiyiin badan oo reer galbeed ah kaddib markii looga digay in uu joojiyo taageerida uu taageerayo Mukhtaar Roobow in ku guuleysto kursiga hoggaanka Koofur Galbeed.
Mukhtar Roobow oo ka mid aha aasasayaashii kooxda Al Shabaab, horayna u soo noqday ku xigeenka hoggaanka Al Shabaab ayaa waxaa yaab leh inuu u sharraxan yahay qabashada kursiga madaxweynanimo ee dowlad goboleedka Koofur Galbeed. Tani waxay muujinee halka dawladdaan Farmajo ay dalak u waddo inuu gacanta u galo waddaaddo tag jir ah.
Mukhtaar Roobow ayaa horraantii sanadkan waxa uu sheegay in uu ka soo goystay kooxda Shabaab, waxaana lagu arkay isagoo si nabad ah u dhex socda magaalada Muqdisho. Waxaa shacabka Soomaaliyeed ee Muqdisho deggan layaab ku noqotay shaqsi ka danbeeyay dhimashada in ka badan 3000 oo qof oo ay ka mid ahaayeen arday qalanjebineysay oo uu Mukhtaar Roobow iyo Zakariya Ismaaciil ay ku xasuuqeen magaalada Muqdisho in ay maanta si nabad ah ku joogaan magaalada, iyagoo weliba jagooyin muhiim ah ka haya dowladda Madaxweyne Farmaajo. Inksatoo aysan dunida galbeedka moogeyn arrintaan haddana waxay la sugayaan waqtigeeda münasibka ah iyo goorta ay Somalida kala barato cadowgeeda Iyo kuwa wanaggeeda ka talinaya.
Waxaa soo ifbaxayay bilooyinkii ugu danbeeyay in kooxda Al Shabaab ay si tartiib ah ula wareegeyso maamulka dalka, iyadoo ay hore ugu hungoobeen isku daygii ay waday dowladda Qatar ee aha in lagu soo daro kooxda Shabaab maamulka dalka. Balse markan ay si fudud ku heleen kaddib markii uu xukunka qabtay madaxweyne Farmaajo oo uu usha u hayo milkiilaha dowladda Fahad Yasin.
Waxaa shakiga sii batay markii uu Farmaajo u magacaabay Fahad Yasiin ku xigeenka NISA, isla usbuuc kaddibna lakala diray dhamaan ciidankii iyo sirdoonki hay’addad NISA ee wax badan ka ogaa waxan, sidoo kalana la eryey shakhsiyaadkii hoggaanka NISA soo ahaa oo mudda joogay, kuwaas oo la hubo inay si fiican u kala yaqaannaan shakhsiyaadka iyo taariikhdooda. Hubaal waxaa ah inay jiraan caruur, haween iyo waayeel markay arkaan Mukhtaar Roobow isku naxaya oo soo xusuusanaya xanuunka ay kooxdiisa ku hayso dalka.
Dowladda Federaalka ayaa sida muuqata wadata musharax gaar ah oo ku guuleysta xilka Madaxweynaha Koofur Galbeed, si ay meesha ugu saarto in dib mar kale u soo laabto Shariif Xasan Sheekh Aadan oo 10-kii sano ee u dambeeyay saameyn ku lahaa siyaasadda dalka. Madaxweyne Farmaajo aya ku taageerayo malaayiin doollar sidii uu Mukhtaar Roobow ugu guuleysan lahaa kursiga madaxweynimo ee Koofur Galbeed, waxaana hadda hawshaas xoog wada gudoomiyaha Barlamanka Maxamed Mursal. Halkaan ka akhriso
Previous articleMeydadka sadex ruux oo rayid ah oo 2 Walaalo yihiin oo laga helay duleedka Mandheera
Next articleR/wasaaraha Itoobiya oo sheegay in Calanka wadankiisa la Bedeli Karaayo!!
Ciidamada Liyuu Boolis oo Dad Shacab ah kulaayay Xadka Itoobiya Iyo...